ကျောင်းထုတ်ခံရသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် ကျောင်းသားမိဘများ ဝန်ခံလက်မှတ် ထိုးစရာ? - Yangon Media Group
ကျောင်းထုတ်ခံရသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် ကျောင်းသားမိဘများ ဝန်ခံလက်မှတ် ထိုးစရာ?
မကွေး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၈
ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်း ပညာ ရေးအသုံးစရိတ်တိုးမြှင့်ရေးဆန္ဒပြမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကျောင်းထုတ်ခံရသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် ကျောင်းသားမိဘများ ဝန်ခံလက်မှတ်ထိုးစရာမလိုဘဲ ကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ရရန် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအား မေတ္တာရပ်ခံပေးမည်ဟု ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့မှ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ ကျောင်းသားများနှင့် ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်က တွေ့ဆုံစဉ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုကပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ တွေကို ကျောင်းထုတ်ခံရခြင်းက ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းသားမိဘ တွေတင် နစ်နာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ နိုင်ငံအတွက်ပါ နစ်နာတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျောင်းထုတ်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ရ အောင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေ ဝန်ခံလက်မှတ်ထိုးစရာမလိုဘဲ မေတ္တာရပ်ခံပေးသွားမယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ အဆိုပါအချက်များတောင်း ဆိုရန်အတွက် ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက် က မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့စုံညီအစည်းအ ဝေးကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”ပခုက္ကူကျောင်းသားသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးမောင်အောင်ခိုင်မင်းက”ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတဲ့အထဲက ကျောင်းထုတ်ခံရတဲ့ ကျောင်းသားတွေ အကျင့်စာရိတ္တ ဖောက်ဖျက်ပါကြောင်းဆိုတဲ့ ဝန်ခံလက်မှတ်ထိုးစရာမလိုဘဲ ကျောင်း ပြန်တက်ခွင့်ရဖို့ မကွေးတိုင်းဒေ သကြီးအစိုးရက မေတ္တာရပ်ခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ရခဲ့တယ်။ ကျန်တဲ့အချက်တွေကတော့ ကျောင်းတက်ရင် ပြန်လည်တောင်းဆိုသွားမှာပါ”ဟု ပြောသည်။ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်း ပညာရေးအသုံးစရိတ်တိုး မြှင့်ရေးဆန္ဒပြမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင်တက္ကသိုလ်ကိုးခုမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၅၆ ဦး ကျောင်းထုတ်ခံခဲ့ရကြောင်း၊ ကျောင်းသားများကျောင်းအမြန်တက်ခွင့်ရရန်အတွက် ကျောင်းထုတ်ခံရသည့် သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များအား အကြောင်းကြားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ဒီဘရူနီနှင့် မာတန်စ်တို့ကို ကျော်လွန်ပြီး အကောင်းဆုံး ဆုကို ဟာဇက် ရရှိ
ကျိုက်ထီးရိုး စေတီတော်ရှိ အမှိုက်ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် ပြည်နယ်အစိုးရ ဦးဆောင်၍ ရေသန့်ဘူးခွံ
ညောင်ဦးမြို့တွင် ခွေးရူးရောဂါ ကင်းစင်ရေးအတွက် ကာကွယ်ဆေးများ မြို့နယ်လုံးကျွတ် ကွင်းဆင်း
တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရမှု တရားခံ ကြည်လင်းနှင့် အောင်ဝင်းဇော်ကို ကြိုးမိန့်